Lion (2016) | MM Movie Store
Saroo ဆိုတဲ့ လူငယျလေးဟာ သူ့အမေ,သူ့အကို တို့နဲ့အတူ အိန်ဒိယနိုငျငံက ဆငျခွဖေုံးရပျကှကျလေးမှာ နထေိုငျပါတယျ။ သူတို့ ညီအကိုနှဈယောကျဟာ ကြောကျမီးသှေးရထားပျေါက ကြောကျမီးသှေးခဲတှကေို ခိုးယူပီး ပွနျရောငျးစားတဲ့ အလုပျကို လုပျကွပါတယျ။
မိခငျကတော့ ကြောကျတောငျတဈခုမှာ ကြောကျခဲ သယျတဲ့ အလုပျကို လုပျပါတယျ။ Saroo တို့ညီအကို နှဈယောကျဟာ တဈယောကျကို တဈယောကျ သိပျခဈြကွတဲ့ ညီအကိုတှပေါ။ တဈရကျမှာတော့ သူ့အကို ညပိုငျးလုပျတဲ့ အလုပျဆီ Saroo ကလိုကျသှားခဲ့ပါတယျ။
အလုပျကိုရောကျဖို့ ရထားတဆငျ့စီးရပါတယျ။ ဘူတာရုံရောကျတော့ Saroo အရမျးအိပျခငျြနတေဲ့အတှကျ သူ့အကိုက ခုံတနျးလေးပျေါမှာ သူ့ညီကိုထားခဲ့ပီး အလုပျသှားလုပျခဲ့ပါတယျ။ Saroo နိုးလာတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ဘူတာရုံထဲမှာ သူတဈယောကျထဲရှိနတော သိလိုကျရပီး သူ့အကို ကိုလိုကျရှာပါတယျ။
အကို ကိုရှာရငျးနဲ့ ရထားတှဲတဈတှဲပျေါမှာ Saroo ဝငျထိုငျရငျး အိပျပြျောသှားပွနျပါတယျ။ ဒီတဈခါ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ သူအိပျနတေဲ့ ရထားကွီးက တခွားတဈနရောဆီ ခုတျမောငျးသှားနပေါဘီ။ ရထားပျေါက ဆငျးဖို့ ကွိုးစားပမေဲ့ ရထားပျေါမှာ လူတဈယောကျမှ မပါဘဲ တံခါးတှကေလညျး ဖှငျ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ရထားရပျလို့ ရထားတံခါးကွီး ဖှငျ့သှားတဲ့အခါမှာတော့ Saroo တဈယောကျ အိန်ဒိယနိုငျငံ အရှပေို့ငျး Bengal ပွညျနယျ ရဲ့ မွို့တျော Calcutta ကို ရောကျသှားပါတယျ။ မွို့ထဲ တဈယောကျထဲ လြှောကျသှားနရေငျး ကလေးဖမျးတဲ့သူတှေ နဲ့တှလေို့ ပွေးခဲ့ရပါသေးတယျ။
Noor ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ လမျးမှာ တှပေီး သူမအိမျကို လိုကျသှားပါတယျ။ အစကတော့ ဖျောရှသေလိုရှိပမေဲ့ ကလေးရောငျးဖို့ကွံစဉျတာကို Saroo က ရိတျမိပီး ထှကျပွေးခဲ့ရပွနျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ လမျးပျေါမှာနရေငျးကနေ ရဲစခနျးကတှပေီ့း မိဘမဲ့ဂဟော ကိုပို့လိုကျပါတယျ။
သုံးလလောကျအကွာမှာတော့ Mrs.Sood ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးက Saroo နဲ့တှပေီ့း သူတို့ သတငျးစာထဲမှာ လူပြောကျကွငွောခဲ့ပမေဲ့ တဈယောကျမှ အကွောငျးမပွနျခဲ့ကွောငျး, Australia လူမြိုး လငျမယားက Saroo ကိုမှေးစားခငျြနကွေောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
မကွာခငျမှာဘဲ Australia နိုငျငံကို Saroo ရောကျလာပီး မှေးစား အဖေ နဲ့ အမေ ဖွဈတဲ့ Sue နဲ့ John ကိုတှခေဲ့ပါတယျ။ Saroo ကိုမှေးစားပီး သိပျမကွာခငျမှာ Mantosh ဆိုတဲ့ ကလေးတဈယောကျကို ထပျမှေးစားပါတယျ။
Mantosh က သာမနျကလေးတှနေဲ့မတူဘဲ စိတျတိုရငျ မိမိကိုယျကိုနာကငျြအောငျလုပျတတျတဲ့ မှေးရာပါ ဦးနှောကျခြို့ယှငျးတဲ့ ရောဂါရှိသူပါ။ Saroo ရဲ့ မှေးစားမိဘ တှဟော သူတို့ နှဈယောကျအပျေါ သိပျကောငျးခဲ့ကွတာပါ။
နှဈပေါငျး ၂၀ အကွာမှာတော့ Saroo က မဲဘုနျးလျမွို့မှာ Hotel Management သငျတနျးတကျဖို့ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ Lucy ဆိုတဲ့ အမရေိကနျသူလေးနဲ့ သငျတနျးမှာတှပေီ့း ခဈြကွိုကျသှားကွပါတယျ။
တဈရကျမှာတော့ သူငယျခငျြးအိမျမှာ ညစာစားရငျး သူ ငယျစဉျက အရမျးစားခြ ငျခဲ့တဲ့ Jalebi (ဂလြဘေီ) မုနျ့ကိုတှရေ့ာကနေ ငယျဘဝကို ပွနျအမှတျရသှားပါတယျ။
သူ့ဘဝ အကွောငျးကို သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပွောဖွဈရာကနေ သူငယျခငျြးတဈယောကျက Google Earth ကနေ သူ့အိမျကို ပွနျရှာပါ့လားဆိုပီး အကွံပေးလိုကျပါတယျ။ ထိုအခြိနျကစလို့ မိသားစုကို ပွနျတှခေ့ငျြတဲ့စိတျတှေ Saroo မှာ စှဲကပျလာပီး Google Earth ကိုသုံးကာ ရှာပုံတျောဖှငျ့ပါတော့တယျ…
ဖွဈရပျမှနျအပျေါ အခွခေံထားတဲ့ Lion ဇာတျကားကို ရုပျရှငျဇာတျကား ပထမဆုံးရိုကျကူးဖူးတဲ့ Director Garth Davis က ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ Saroo အရှယျရောကျခြိနျဇာတျကောငျ အဖွဈ Slumdog Millionaire နဲ့ နာမညျရခဲ့တဲ့ မငျးသား Dev Patel က သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ကလေးဘဝ Saroo အဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Sunny Pawar ဆိုတဲ့ ကလေးသရုပျဆောငျလေးရဲ့ သရုပျဆောငျပုံတှကေို အတျောလေး သဘောကမြိခဲ့ပါတယျ။ Nicole Kidman နဲ့ Rooney Mara တို့ကလညျး အားဖွညျ့ထားပါတယျ။ လာမယျ့ Oscar ဆုပေးပှဲမှာ ဆု ၆ဆု ရာထား ခံထားရပါတယျ။ Saroo ရဲ့ တကယျ့အသံထှကျအမှနျက Sheru ဖွဈပီး အဓိပ်ပါယျကတော့ Hindi ဘာသာစကားအရ Lion ဖွဈပါတယျ။
မိသားစုနဲ့ ဝေးကှာနရေတဲ့အခါ လှမျးစှတျတမျးတမိတာမြိုး, ဒုက်ခတှေ ကွုံရတဲ့အခါ အိမျလှမျးမိတာမြိုးကို ကြှနျတျောတို့တှေ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဘယျလောကျပငျ သာယာတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ရှိနပေါစေ မိသားစုနဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှကေိုပွနျတမျးတမိကွမှာပါ။
Saroo ရဲ့ ရငျထဲမှာရှိတဲ့ ခံစားခကျြကို ကြှနျတျော အလှယျတကူဘဲ ကိုယျခငျြး စာခံစားလို့ရခဲ့ပါတယျ။ ၂၅နှဈလောကျ ငါ့မိသားစု ငါ့ကို ပူဆှေးစှာလိုကျရှာ နခေဲ့တဲ့ ခံစားခကျြကို ငါနားလညျတဲ့ ဆိုတဲ့ Saroo ရဲ့ စကားဟာ သူ့မိသားစု အပျေါမှာထားရှိတဲ့ သံယောဇဉျပါ။
Saroo ရဲ့ သူ့အကိုပျေါမှာ ထားတဲ့ သံယောဇဉျဟာ အကိုတဈယောကျထကျပိုတဲ့ ဖခငျတဈယောကျလို အားကိုးတဲ့ သံယောဇဉျမြိုးဖွဈခဲ့မှာပါ။ တကယျတော့ မိသားစု ရဲ့ မတ်ေတာကသာ အနှေးထှေးဆုံးပါ…….
Saroo ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ သူ့အမေ,သူ့အကို တို့နဲ့အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာ ကျောက်မီးသွေးရထားပေါ်က ကျောက်မီးသွေးခဲတွေကို ခိုးယူပီး ပြန်ရောင်းစားတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကြပါတယ်။
မိခင်ကတော့ ကျောက်တောင်တစ်ခုမှာ ကျောက်ခဲ သယ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ Saroo တို့ညီအကို နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ညီအကိုတွေပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့အကို ညပိုင်းလုပ်တဲ့ အလုပ်ဆီ Saroo ကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ကိုရောက်ဖို့ ရထားတဆင့်စီးရပါတယ်။ ဘူတာရုံရောက်တော့ Saroo အရမ်းအိပ်ချင်နေတဲ့အတွက် သူ့အကိုက ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ သူ့ညီကိုထားခဲ့ပီး အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Saroo နိုးလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဘူတာရုံထဲမှာ သူတစ်ယောက်ထဲရှိနေတာ သိလိုက်ရပီး သူ့အကို ကိုလိုက်ရှာပါတယ်။
အကို ကိုရှာရင်းနဲ့ ရထားတွဲတစ်တွဲပေါ်မှာ Saroo ဝင်ထိုင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ သူအိပ်နေတဲ့ ရထားကြီးက တခြားတစ်နေရာဆီ ခုတ်မောင်းသွားနေပါဘီ။ ရထားပေါ်က ဆင်းဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ရထားပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်မှ မပါဘဲ တံခါးတွေကလည်း ဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ရထားရပ်လို့ ရထားတံခါးကြီး ဖွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Saroo တစ်ယောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Bengal ပြည်နယ် ရဲ့ မြို့တော် Calcutta ကို ရောက်သွားပါတယ်။ မြို့ထဲ တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်သွားနေရင်း ကလေးဖမ်းတဲ့သူတွေ နဲ့တွေ့လို့ ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
Noor ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းမှာ တွေပီး သူမအိမ်ကို လိုက်သွားပါတယ်။ အစကတော့ ဖော်ရွေသလိုရှိပေမဲ့ ကလေးရောင်းဖို့ကြံစဉ်တာကို Saroo က ရိတ်မိပီး ထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လမ်းပေါ်မှာနေရင်းကနေ ရဲစခန်းကတွေ့ပီး မိဘမဲ့ဂေဟာ ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။
သုံးလလောက်အကြာမှာတော့ Mrs.Sood ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက Saroo နဲ့တွေ့ပီး သူတို့ သတင်းစာထဲမှာ လူပျောက်ကြေငြာခဲ့ပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ အကြောင်းမပြန်ခဲ့ကြောင်း, Australia လူမျိုး လင်မယားက Saroo ကိုမွေးစားချင်နေကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာဘဲ Australia နိုင်ငံကို Saroo ရောက်လာပီး မွေးစား အဖေ နဲ့ အမေ ဖြစ်တဲ့ Sue နဲ့ John ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Saroo ကိုမွေးစားပီး သိပ်မကြာခင်မှာ Mantosh ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်မွေးစားပါတယ်။
Mantosh က သာမန်ကလေးတွေနဲ့မတူဘဲ စိတ်တိုရင် မိမိကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ မွေးရာပါ ဦးနှောက်ချို့ယွင်းတဲ့ ရောဂါရှိသူပါ။ Saroo ရဲ့ မွေးစားမိဘ တွေဟာ သူတို့ နှစ်ယောက်အပေါ် သိပ်ကောင်းခဲ့ကြတာပါ။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာမှာတော့ Saroo က မဲဘုန်းလ်မြို့မှာ Hotel Management သင်တန်းတက်ဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Lucy ဆိုတဲ့ အမေရိကန်သူလေးနဲ့ သင်တန်းမှာတွေ့ပီး ချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ညစာစားရင်း သူ ငယ်စဉ်က အရမ်းစားချ င်ခဲ့တဲ့ Jalebi (ဂျလေဘီ) မုန့်ကိုတွေ့ရာကနေ ငယ်ဘဝကို ပြန်အမှတ်ရသွားပါတယ်။
သူ့ဘဝ အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောဖြစ်ရာကနေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Google Earth ကနေ သူ့အိမ်ကို ပြန်ရှာပါ့လားဆိုပီး အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကစလို့ မိသားစုကို ပြန်တွေ့ချင်တဲ့စိတ်တွေ Saroo မှာ စွဲကပ်လာပီး Google Earth ကိုသုံးကာ ရှာပုံတော်ဖွင့်ပါတော့တယ်…
ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် အခြေခံထားတဲ့ Lion ဇာတ်ကားကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပထမဆုံးရိုက်ကူးဖူးတဲ့ Director Garth Davis က ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Saroo အရွယ်ရောက်ချိန်ဇာတ်ကောင် အဖြစ် Slumdog Millionaire နဲ့ နာမည်ရခဲ့တဲ့ မင်းသား Dev Patel က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကလေးဘဝ Saroo အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Sunny Pawar ဆိုတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကို အတော်လေး သဘောကျမိခဲ့ပါတယ်။ Nicole Kidman နဲ့ Rooney Mara တို့ကလည်း အားဖြည့်ထားပါတယ်။ လာမယ့် Oscar ဆုပေးပွဲမှာ ဆု ၆ဆု ရာထား ခံထားရပါတယ်။ Saroo ရဲ့ တကယ့်အသံထွက်အမှန်က Sheru ဖြစ်ပီး အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Hindi ဘာသာစကားအရ Lion ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့အခါ လွမ်းစွတ်တမ်းတမိတာမျိုး, ဒုက္ခတွေ ကြုံရတဲ့အခါ အိမ်လွမ်းမိတာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့တွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပင် သာယာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရှိနေပါစေ မိသားစုနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကိုပြန်တမ်းတမိကြမှာပါ။
Saroo ရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်တော် အလွယ်တကူဘဲ ကိုယ်ချင်း စာခံစားလို့ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၅နှစ်လောက် ငါ့မိသားစု ငါ့ကို ပူဆွေးစွာလိုက်ရှာ နေခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကို ငါနားလည်တဲ့ ဆိုတဲ့ Saroo ရဲ့ စကားဟာ သူ့မိသားစု အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ပါ။
Saroo ရဲ့ သူ့အကိုပေါ်မှာ ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ဟာ အကိုတစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်လို အားကိုးတဲ့ သံယောဇဉ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ တကယ်တော့ မိသားစု ရဲ့ မေတ္တာကသာ အနွေးထွေးဆုံးပါ…….
Starwars3Revenge of The Sith (2005)